प्रदेश २ मा क्रस भोटिड्डको चर्चा चुलिंदै - Jhilko
प्रदेश २ मा क्रस भोटिड्डको चर्चा चुलिंदै
जनकपुर । प्रदेश २ राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा क्रस भोटिङ्गको सम्भावना रहेको चर्चाले बजार पाएको छ । चुनाबको मिति नजिकिएसँगै प्रदेश २ मा दुबै गठबन्धनबाट क्रस भोटिङ्ग हुन सक्ने चर्चा चुलिएको हो । नेकपा–राजपा र काँग्रेस–समाजवादी दुबै गठबन्धनको तर्फबाट क्रस भोटिङ्ग हुनसक्ने भएकाले चुनाबी परिणाम फरक पर्न सक्ने सम्भावना रहेको स्थानीयहरूको बुझाइ छ । खासगरी राजपा र समाजवादीका तर्फबाट उम्मेदवार भएकाहरूको व्यक्तिगत छवि र विगतका क्रियाकलाप जस्ता कारणले पनि चुनावी परिणाममा फरक ल्याउन सक्ने आंकलन गर्ने गरिएको छ । फरकफरक गठबन्धनमा रहेका राजपा र समाजवादीका तर्फबाट क्रस भोटिङ्ग हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ । यद्यपि बुद्धिजीवीहरूको भनाइमा यो चुनाव अन्य चुनाव भन्दा फरक भएकाले क्रस भोटिङ्गको सम्भावना कम छ ।
चुनाबी अंकगणितमा कुनै फेबदल नभए नेकपा–राजपा गठबन्धनको जीत सुनिश्चित रहेको देखिन्छ । प्रदेश २ मा एक सय ३६ स्थानीय तह छन् । जसका प्रमुख÷उपप्रमुख गरी दुई सय ७२ तथा प्रदेश सभा सदस्य एक सय सात गरी कुल तीन सय ७९ मतदाता छन् । जसमध्ये राजपा–नेकपा गठबन्धनको प्रदेश सभातर्फ ५७ र स्थानीय तहतर्फ एक सय २७ मत गरी एक सय ८४ मत रहेको छ भने समाजवादी–काँग्रेस गठबन्धनको प्रदेश सभा तर्फ ४९ र स्थानीय तहतर्फ एक सय ३३ मत गरी एक सय ८२ मत रहेको छ । यस्तै नेपाली जनता दलको दुई र संघीय समाजवादी पार्टीको एक मत रहेको छ । क्रस भोटिङ, खरीद बिक्री लगायतका उलटफेर नभए राजपा–नेकपा गठबन्धन उम्मेदवारको जीत लगभग सुनिश्चित मानिन्छ । तर, गोप्य मतदान भएकाले जे पनि हुन सक्ने भन्नेहरूको कमी पनि छैन् ।
यस्तै चर्चाहरूका बीच दुबै गठबन्धनका नेता कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारहरू यतिबेला मत आफ्नो पक्षमा तान्न जुटेका छन् । अघिल्लो राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भन्दा यो पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई ठूलै कसरत गर्नु परिरहेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ को राष्ट्रियसभा निर्वाचन रोमाञ्चक र पेचिलो समेत बन्दै गएको छ । ठूठूला दलहरूबीच भएको गठबन्धका कारण प्रदेश २ मा कुन गठबन्धनले बाजी मार्ला भन्ने यतिबेला भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । यही माघ ९ गते हुन लागेको निर्वाचनमा दुई दाजुभाइको भिडन्तले प्रदेश २ मा थप रोमाञ्चकता ल्याएको छ । प्रदेश २ मा राजपा र समाजवादी पार्टीको मजबुत उपस्थिति रहेको र ती दुबै पार्टीले छुट्टाछुट्टै गठबन्धन बनाएपछि चुनाबी परिणामको बिषयलाई लिएर यतिबेला चियापसल र पानपसलहरूमा समेत बहस र अडकलबाजी भइरहेका छन् । राजपा–नेकपाको गठबन्धले बाजी मार्छ कि समाजवादी–काँग्रेसको गठबन्धनले त्यो सबैको चासोको बिषय बनेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) को गठबन्धनको तर्फबाट राजपाले पुर्वमन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवलाई उम्म्ेदवार बनाएको छ भने नेपाली काँग्रेस र समाजवादी पार्टीको गठबन्धनका तर्फबाट समाजवादी पार्टीले उनको सहोदर भाइ अनिरुद्ध प्रसाद सिंह यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ । सप्तरीको बोदे बसाइन नगरपालिका ५ निवासी मृगेन्द्र दाजु र अनिरुद्ध भाइ हुन् ।
कतिपयले दुवै दाजुको चुनाबी प्रतिप्रस्र्धाका कारण सिंङ्गो गठबन्धनकै चुनावी परिणामलाई पनि फरक पार्न सक्ने बताइरहेका छन् भन्ने कतिपयले त्यस्तो सम्भावना नरहेको दाबी गरिरहेका छन् । त्यसैले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनलाई मजबुत र क्रस भोटिङ हुन नदिन दुबै गठबन्धनले समयमै सतर्कता अपनाउनुपर्ने बुद्धिजीवीहरूको कथन छ ।
प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक पुनः अन्यौलमा परेको छ । सोमवार दिउँसो बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक बस्दै नबसी अर्काे सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै अर्काे सूचना जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको छ । सचिवालयले अनिश्चिकालका लागि बैठक स्थगित गरेपछि प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक पुनः अन्यौलमा परेको छ । अन्यौलमा परेको प्रदेशसभाको बैठक तत्काल सुचारु हुने सम्भावना देखिदैन । गत वर्ष सञ्चालन भएको योजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले निरन्तर अबरुद्ध गर्दै आएको प्रदेशसभाको बैठक कसरी सुचारु गराउने ? लामो समयदेखि रोकिएको योजनाको भुक्तानी कसरी गर्ने ? लगायतका बिषय प्रदेश सरकार आफै अन्यौलमा रहेको श्रोतको भनाइ छ । निरन्तर प्रदेश सभाको बैठक अबरुद्ध भएकाले प्रदेशसभाका सदस्यहरू बिजनेश बिहीन हुनुको साथै पारित गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण बिधेयकहरू समेत थन्किएका छन् । प्रदेश २ को नामाकरण र स्थानीय राजधानीको बिषय टुङ्गयाउन नसक्दा प्रदेश २ सरकार र संसाद नैतिक संकटमा समेत पर्दै गएको बिश्लेषकहरूको बुझाइ छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
हाते कागज उद्योग सङ्कटमा
करिब रु सात लाखको लगानीमा सञ्चालनमा आएको सिर्जना नेपाली हाते कागज उद्योग कच्चा पदार्थ,...
सांस्कृतिक अपहरणमा पर्दै फागु पूर्णिमा
यो पर्वमा अश्लिलता र असभ्यताले हद नाघ्न थालेको भर्खरैको घटना होइन । महामानव बुद्धलाई...
अक्टोप्सबारे नयाँ खुलासा
सामुद्रिक जीव अक्टोप्सले शताब्दियौं देखि वैज्ञानिकहरूलाई अचम्म पार्दै आएकोमा अहिलेसम्म...
डुङ्गा दुर्घटनामा एघारको मृत्यु
भारतको मध्य भागमा पर्ने राज्य मध्यप्रदेशमा भएको एक डुङ्गा परी एघार व्यक्तिको मृत्यु...